काठमाडौंको निषेधाज्ञा के हुन्छ ? सिडियोहरुले यस्तो निर्णय गरे | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more काठमाडौंको निषेधाज्ञा के हुन्छ ? सिडियोहरुले यस्तो निर्णय गरे
काठमाडौंको निषेधाज्ञा के हुन्छ ? सिडियोहरुले यस्तो निर्णय गरे
भदौ १६ गते, २०७७ - १५:००
अब पुनः निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा भने पुनः गृह मन्त्रालयलाई नै निर्णय गर्न दिने निष्कर्शमा उनीहरु पुगेका छन्
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा गत भदौ तीन गतेदेखि लागु गरिएको निषेधाज्ञा भोली राती १२ बजेबाट सकिँदैछ । लकडाउन भन्दा पनि कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा थप गर्ने या नगर्न विषयमा अन्यौल छाइरहेको बेला उपत्यका अन्तर्गत तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने संयुक्त बैठक गरेका छन् ।
उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमण बढदै गइरहेको र भयावह स्वरुप लिन सक्ने भएकोले गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञाको घोषण गरेका थिए । शुरुमा नौ गतेसम्म लागु गरिएको निषेधाज्ञ पुनः थपिएर १७ गतेसम्म लागु हुने निर्देशन प्रशासन कार्यालयले जारी गरेका थिए । तर अब पुनः निरन्तरता दिने या नदिने भन्ने विषयमा भने पुनः गृह मन्त्रालयलाई नै निर्णय गर्न दिने निष्कर्शमा उनीहरु पुगेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहाल, ललितपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट र भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले भर्चुअल मिटिङ बसेर सुझावसहितको निर्णय गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई पठाउने तयारी गरेका हुन ।
तीनवटै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे आ–आफ्ना जिल्लाका स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालयसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सरोकार निकायसँग लिखित राय लिइसकेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । तर, स्थानीय तहहरुले अझै केही साता निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझाव र वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गरी तीन जिल्लाकै प्रशासनले सुझावसहितको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयलाई पठाइने बताए ।
पछिल्लो दुई सातामा परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेकाले सर्वसाधारण सोहीअनुसार सावधान हुनुपर्ने उनले बताए । अब प्रशासनले संक्रमणमुक्त भएकाहरुबाट पनि महामारीविरुद्ध जनचेतना फैलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । निषेधाज्ञाको समयमा पनि संक्रमितको संख्या भने घटेको छैन ।
भदौ १६ गते, २०७७ - १५:०० मा प्रकाशित